ဒါကတော့ အူရီဒူးတစ်မျိုးတည်းနဲ့သာ ရရှိနိုင်တဲ့ ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ငွေဖြည့်တိုင်း *123*PIN# ကို ခေါ်ဆိုလိုက်တာနဲ့ ငွေဖြည့်ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အစီအစဉ် ၂ ခုကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ကတော့ အူရီဒူးဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းမှုအားလုံးအတွက် အကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်း တစ်ဆင့်ချင်း လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။
အဆင့်(၁): ငွေဖြည့်ကတ်ကိုဝယ်ယူပြီး လျှို့ဝှက် PIN နံပါတ်ကို ခြစ်ပါ။
အဆင့်(၂): *123*PIN# ကို ခေါ်ဆိုပါ။
အဆင့်(၃): နှစ်သက်ရာအစီအစဉ်ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
ငွေဖြည့်တိုင်း ရွေးချယ်စရာအစီအစဉ် ၃ခုကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အစီအစဉ် ၁ » ၆ဆတိုး ဒေတာ အစီအစဉ် + 500MB Facebook ငွေဖြည့်လက်ဆောင် ကို ဝယ်ယူရန်
အစီအစဉ် ၂ » ၁၂၀% ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင် ကို ရယူရန်
ဒီအစီအစဉ်ကနေ ဘယ်လိုအပိုလက်ဆောင်တွေ ရနိုင်မလဲ?
ဒါကတော့ ငွေဖြည့်ပမာဏနဲ့ မိတ်ဆွေရွေးချယ်မှုပေါ် မူတည်ပါတယ်။ အစီအစဉ် ၁ ကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ၆ဆတိုးဒေတာအစီအစဉ်ကို ဝယ်ယူပြီး အထူး ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင်တွေ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစီအစဉ် ၂ကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ 120% ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင်ရရှိမှာပါ။
ဘယ်ငွေဖြည့်ကတ်နဲ့ဖြည့်ဖြည့် ဒီအစီအစဉ်ကို ရယူနိုင်မှာလား?
ဟုတ်ကဲ့။ ငွေဖြည့်ကတ်အားလုံး အကျုံးဝင်ပါတယ်။
e-load နဲ့ဖြည့်ရင်ကော ဒီအစီအစဉ်ကို ရယူနိုင်မှာလား?
ရယူနိုင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေရဲ့ ငွေဖြည့်မှုအတွက် ရယူနိုင်မည့် အစီအစဉ်များကို မိတ်ဆွေဝယ်ယူသောဆိုင်တွင်အသိပေးစာရရှိမှာဖြစ်လို့ ဆိုင်တွင်မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
My Ooredoo App နဲ့ဖြည့်ရင်ကော ဒီအစီအစဉ်ကို ရယူနိုင်မှာလား?
ရယူနိုင်ပါတယ်။ လျှို့ဝှက် PIN နံပါတ်ကို ခေါ်ဆိုပြီး အစီအစဉ် ၃ ခုမှ နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အစီအစဉ်ကိုမှ မရွေးချယ်ရင်ကော ဘာဖြစ်မလဲ?
မိတ်ဆွေဖြည့်သွင်းလိုက်တဲ့ ဖုန်းငွေကတော့ ငွေလက်ကျန်အဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေမှာပါ။
အစီအစဉ် ၁ ကိုရွေးချယ်ရင် ၆ဆတိုး ဒေတာအစီအစဉ်တစ်ခုကို မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်း ငွေလက်ကျန်ကနေ အလိုအလျှောက် ဝယ်ယူပီးသားဖြစ်မှာဖြစ်ပြီး ၆ဆတိုးဒေတာအစီအစဉ်နှင့်အတူ Facebook အတွက် ဒေတာငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင်ကိုလဲ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကို အဆင့်၁ဆင့်တည်းနဲ့ ရယူနိုင်မှာပါ။
အစီအစဉ် ၂ ကိုရွေးချယ်ရင် 120% ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင် ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ဖြည့်သွင်းလိုက်တဲ့ ဖုန်းငွေကတော့ ငွေလက်ကျန်အဖြစ်ရှိနေမှာပါ။
menu ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ မရွေးချယ်ဖြစ်ရင် နောက်ပိုင်း အစီအစဉ်တွေကို ရယူနိုင်သေးလား?
ရယူနိုင်ပါတယ်။ *1234# ကိုခေါ်ဆိုပြီး နှစ်သက်ရာအစီအစဉ်ကို ၂၄နာရီအတွင်း ရွေးချယ်လိုက်ရုံပါပဲ။
တခြားပုံမှန် ဒေတာနဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအစီအစဉ်တွေကော ဝယ်ယူနိုင်သေးလား?
ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ *140# ကိုခေါ်ပြီး ဒေတာအစီအစဉ်တွေ ဝယ်ယူနိုင်သလို *150# ကိုခေါ်ဆိုပြီးလဲ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအစီအစဉ်တွေ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ My Ooredoo App ကနေလဲ အခြားအစီအစဉ်တွေ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ ဒေတာအစီအစဉ်တွေရဲ့ သက်တမ်းက ဘယ်လောက်လဲ?
ပုံမှန် ဒေတာအစီအစဉ်တွေရဲ့ သက်တမ်းအတိုင်း ရက် ၃၀ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Facebook အပိုလက်ဆောင်ရဲ့ သက်တမ်းက ဘယ်လောက်လဲ?
သက်တမ်း ၅ ရက်ရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အပိုလက်ဆောင်တွေရဲ့သက်တမ်းက ၃ရက်ဖြစ်ပေမယ့် ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ ၅ရက်သက်မှတ်ပေးထားပါတယ်။
120% ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင် သက်တမ်းကဘယ်လောက်လဲ? ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲ?
သက်တမ်း ၅ရက်ရှိပြီး သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက်၊ ပြည်တွင်းဖုန်းအားလုံးခေါ်ဆိုရန်နှင့် SMS ပို့ရန် အတွက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
ကြိုတင်ငွေပေးချေစနစ်အသုံးပြုသူများနှင့် B2B သုံးစွဲသူများ ရယူနိုင်ပါတယ်။
ကြိုက်သလောက်ရယူနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ငွေဖြည့်ကတ်၊ e-load ဒါမှမဟုတ် My Ooredoo App ကငွေဖြည့်တိုင်း အပိုလက်ဆောင်များပါဝင်တဲ့ ရွေးချယ်စရာ အစီအစဉ်များ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ Facebook အစီအစဉ်မှ
၃။ သက်တမ်း ရက် ၃၀ ထက်နည်းသော ဒေတာအစီအစဉ်များမှ
၄။ သက်တမ်း ရက် ၃၀ ရှိသော ဒေတာအစီအစဉ်များမှ
၅။ ၆ဆတိုး ရက်၉၀ အစီအစဉ်မှ
၆ဆတိုး ဒေတာနှင့် Facebook လက်ကျန်အတွက် *140*6#
120% ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင်အတွက် *124# ကို ခေါ်ဆိုစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
My Ooredoo App ကနေစစ်ဆေးရင် ပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်။ My Ooredoo App ကို Google Store ဒါမှမဟုတ် *565# ကိုခေါ်ဆိုပြီး ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
PIN နံပါတ်ကို မှားထည့်မိရင် ဘာဖြစ်မလဲ?
PIN နံပါတ်ကို မှန်အောင်ရိုက်ထည့်ဖို့လိုပါတယ်။ အကူအညီလိုအပ်ရင် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ 234 မှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ပရိုမိုးရှင်းမှာ *123# မှ ဖုန်းငွေဖြည့်မှု နှင့် My Ooredoo App မှဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းမှုသာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
သုံးစွဲသူမှ option ၂ခုထဲမှ မရွေးချယ်ပါက ဖုန်းငွေဖြည့်သည့် ပမာဏကိုသာ ရရှိပါမည်။
၆ဆတိုး ဒေတာ သက်တမ်းမှာ ရက်၃၀ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများအနေနဲ့ ဒေတာ 1MB ကို 5.71 ကျပ် ဖြင့်အသုံးပြုရန် ဖုန်းငွေကို လက်ခံရရှိပါမည်။
သုံးစွဲသူမှ ဖုန်းငွေဖြည့်ပြီး ၆ဆတိုး ဒေတာ အစီအစဉ် ဝယ်ပါက Facebook ဒေတာ ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင် ရပါမည်။
Facebook ဒေတာ ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင် သက်တမ်းမှာ ၅ရက်ဖြစ်ပါသည်။
၁၂၀% အပိုလက်ဆောင်ကို သုံးသလောက်ပေး အင်တာနက် ၊ ပြည်တွင်းဖုန်းအားလုံး ခေါ်ဆိုမှု နှင့် SMS ပေးပို့မှု တို့အတွက် သုံးနိုင်ပါသည်။
၁၂၀% အပိုလက်ဆောင်ကို ၅ရက်သုံးနိုင်ပါသည်။
Red Dot (သို့) OK Dollar (သို့) ဘဏ်များမှ ဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းပါက အပိုလက်ဆောင် ရရှိမည် မဟုတ်ပါ
ယခု ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်မှာ နောက်ထပ် မကြေငြာမီ အချိန်အထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။
၆ဆတိုး ဒေတာ ၊ Free Facebook လက်ဆောင် ၊ ၁၂၀% ဖုန်းငွေ အပိုလက်ဆောင်အစီအစဉ် တို့ ပတ်သတ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ooredoo.com.mm တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။